China TDY-1 China Electric Medical Operating Table Table သည်ဆေးရုံထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများအတွက်စျေးနှုန်း Wanyu
TDY-1 China Electric Medical Operating Table ဆေးရုံစျေးနှုန်း
TDY-1 လျှပ်စစ်လည်ပတ်စားပွဲသည်သူမသည်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်းအမျိုးမျိုးသောကိုယ်ဟန်အနေအထားညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတွန်းအားပေးသောတွန်းလှည်းမော်တာလည်ပတ်မှုစနစ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်စားပွဲတင်ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ရှေ့နှင့်နောက်သို့ tilt၊ ဘယ်နှင့်ညာ tilt၊
ဤသည်ဘက်စုံသုံးလျှပ်စစ်လည်ပတ်စားပွဲသည်ခွဲစိတ်မှုအမျိုးမျိုးအတွက်သင့်လျော်သည်၊ ဥပမာဝမ်းဗိုက်ခွဲစိတ်ခြင်း၊ သားဖွားမီးယပ်အထူးကု၊ ENT၊ ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကု၊
X-Ray Scanning မှာရရှိနိုင်ပါတယ်
PFCC tabletop ကို X-Ray စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ TDY-1 လျှပ်စစ်လည်ပတ်စားပွဲကို ၃၀၀mm မီလီမီတာထက်ပိုသောဘာသာပြန်ဆိုနိုင်ပြီးခွဲစိတ်မှုကာလအတွင်း C-arm အတွက်ကောင်းသောရှုထောင့်ကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီး X-Ray film box များနှင့်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
Hand Controller နှင့် Optional Panel Control များသည်ခွဲစိတ်မှုအတွက်နှစ်ဆကာကွယ်ပေးသည်။
X-Ray Scanning တွင်ရနိုင်သည်
3. Built-in အားပြန်သွင်းနိုင်သည့်ဘက်ထရီ
TDY-1 လျှပ်စစ်လည်ပတ်စားပွဲသည်စွမ်းဆောင်ရည် ၅၀ လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်အားပြန်သွင်းနိုင်သည့်ဘက်ထရီတပ်ဆင်ထားသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်းသည်လုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိစေရန်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကိုထောက်ပံ့ရန် AC ပါဝါထောက်ပံ့မှုရှိသည်။
4. Built-in ကျောက်ကပ်တံတား
ဆရာဝန်များသည်အသည်းနှင့်ကျောက်ကပ်ခွဲစိတ်ကုသမှုပြုလုပ်ရန်အဆင်ပြေသော lumbar bridge ဖြစ်သည်
စံပြပစ္စည်း TDY-1 လျှပ်စစ်လည်ပတ်စားပွဲ
အရှည်နှင့်အကျယ် 2070mm * 550mm
မြင့်တက်ခြင်း (အပေါ်နှင့်အောက်) 1000mm / 700mm
Head Plate (အပေါ်နှင့်အောက်) 45 ° / 90 °
နောက်ကျောပြား (အပေါ်နှင့်အောက်) 75 ° / 20 °
ခြေထောက်ပြား (အပေါ် / အောက် / အပြင်) 15 ° / 90 ° / 90 °
ဘေးတိုက်စောင်း (ဘယ်နှင့်ညာ) 15 ° / 15 °
Flex / Reflex ပေါင်းစပ်စစ်ဆင်ရေး
X-Ray ဘုတ်အဖွဲ့ optional ကို
ဗို့အား 220V / 110V
ကြိမ်နှုန်း 50Hz / 60Hz
1 မေ့ဆေးမျက်နှာပြင် 1 အပိုင်းအစ
2 ခန္ဓာကိုယ်အထောက်အပံ့ ၁ စုံ
3 Arm ပံ့ပိုးမှု ၁ စုံ
4 ပခုံးထောက် ၁ စုံ
5 ခြေထောက်အထောက်အပံ့ ၁ စုံ
6 ခြေထောက်ပံ့ပိုးမှု ၁ စုံ
6 ကျောက်ကပ်တံတား 1 အပိုင်းအစ
8 Clamp ကိုပြုပြင်တာတွေ ၈ ပိုင်း
9 Long က Fixing ညှပ် ၁ စုံ
10 လက်မောင်းအဝေးထိန်း 1 အပိုင်းအစ
11 ဓာတ်အားလိုင်း 1 အပိုင်းအစ
ရှေ့သို့ တရုတ်နိုင်ငံရှိ TDY-Y-1 ဘက်စုံသုံးလျှပ်စစ် - ဟိုက်ဒရောလစ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလည်ပတ်စားပွဲ
နောက်တစ်ခု: ဆေးရုံအတွက် TS လက်စွဲစာအုပ်ဟိုက်ဒရောလစ်ခွဲစိတ်ကုသဇယား
TDY-2 သံမဏိမိုဘိုင်းလျှပ်စစ်လျှပ်စစ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအို ...
TDG-1 Godd အရည်အသွေးမျိုးစုံသုံးလျှပ်စစ်လည်ပတ်မှု ...